UkuKhetha okunempilo kuBomi - Khetha Uphawu
UkuKhetha okunempilo kuBomi
Xa sicinga ngemikhwa yethu kunye nenkqubo yethu yemihla ngemihla, sihlala singxamele ukungena indlu yesithandathu yetshathi yokuzalwa komntu kwaye oku kushiya indawo encinci yokuqonda isizathu esisemva kwesenzo. Le yindlu yefiziyoloji yethu kunye nokubonakaliswa kwenkqubo yethu, kanye njengendlu yesibini ibalisa ibali lokukhetha kwethu ukutya kunye nesidingo sethu sokutya kunye nokuchitha zonke izinto eziphathekayo ebomini. Sekunjalo, ezi yimbonakaliso nje yemeko enzulu yangaphakathi kwaye xa kufikwa kwimiba yomkhwa, siya kubona ukuba zonke zizimela ngaphakathi komntu. Inyanga kwaye indlu yesine umlawuli, kunayo nayiphi na enye indawo.
INyanga kunye neNdlu yesine
Ngokuxhomekeke kwisikhundla seNyanga, iiplanethi zikhangele kwindlu yethu yesine kunye nomlawuli wayo, siya kuqonda iipatheni ezisisiseko kunye neengxaki ezinokwenzeka ngendlela yomntu kumzimba wabo, kwaye ngenxa yoko - ubukho babo bonke. Sonke siyizidalwa zomkhwa kwaye iinkqubo ezininzi ezingezizo zenzeka ebomini bethu imihla ngemihla, ziqala iimpendulo ezahlukeneyo kwi-physiology yethu, ngokungathandabuzekiyo zichaphazela imeko yethu yeemvakalelo kunye nazo zonke iinkalo zobomi ezisenza sizive sivuya, sinexhala okanye sinenkathazo nangayiphi na indlela.
Ukuba sinqwenela ukugqiba ukuba yintoni efihlayo emva kwesenzo, kufuneka sihlale sijonga isiseko seemvakalelo kwitshathi yokuzalwa, kuba njengoko singayikulibala ukubaluleka kweLanga kuwo wonke ukufudumala nozuko lwalo, asifanele sicinge. yeNyanga kunye nesimboli sayo njengeeplanethi. INyanga ngundoqo wobuntununtunu, kulawulo lwamaza oMhlaba kunye nangaphakathi kwethu Amanzi kwaye imele intsimi yayo yonke imikhwa esiyikhulisayo, ukususela ekuvukeni kwethu ekuseni, sixubha amazinyo ethu, sikhethe isidlo sakusasa sethu, kwabo badla ezinzulwini zobusuku kunye namakhoboka alo naluphi na uhlobo. INyanga yethu iya kuthetha ngamazwi ayo, ngokukhetha ikofu okanye itiye, isalathiso apho sivuselela isuphu yethu, kunye nayo nayiphi na into encinci kwaye ibonakala ingabalulekanga onokucinga ngayo ukuba siyiphinda yonke imihla, iveki nganye okanye inyanga nenyanga.
Inkqubo Yethu Yemihla Ngemihla
Kusasa lixesha losuku apho kufuneka sifumane indawo yokumisa. Siyabona ukuba isidingo sethu sobuntu sokwahlula kwiplanethi yoMhlaba ibonisa kwezona zinto zilula, kuba ikofu, ukufunda, umabonwakude, kunye nokugxila kwethu kwangoko kwiifowuni zethu zidla ngokusiphakamisa kwinto Umoya apho singafanele siye khona njengoko sifika kwindawo yokwazisa siphaphile kwaye silungele ukuqala usuku lwethu. Imidiza inefuthe elifanayo kwaye kunjalo namayeza, kunye nazo zonke iincoko ezithandekayo ezimele zilinde ixesha elahlukileyo lemini, ukuze sihlale silungelelene. Ukuze sizibeke phantsi size siqalise usuku lwethu sihlaziyekile yaye sisempilweni, kufuneka sitye into eyonwabisayo, sisele iti eshushu, senze umthambo size senze wonke umsebenzi owenziwe ngokomzimba, oku kuquka ukucoca indlu nemisebenzi yasekhaya esizalisa ngamandla nokucoceka kwezinto eziphathekayo. sihlala kuyo.
Ukhetho olunempilo jikelele lusebenza kusuku ngalunye ngokunjalo, kwaye ugqaliselo lwethu kufuneka lujike kancinane kwimiba enxulumene noMoya njengoko sizilungiselela ukulala. Embindini wemini ichithwa kwindawo yokusebenzela ngenxa yesizathu, xa amandla ethu aphakanyisiweyo esenza ukuba sivelise kwaye sifikelele kwincopho yamandla ethu. Eli ikwalixesha apho isisu sethu sinokugaya ukutya ngokukhawuleza kwaye kungokwemvelo ukuba asiyi kudinga kakhulu njengoko kusihlwa kungena kwaye siphendukela kubudlelwane, imisebenzi yokuzonwabisa, umculo, ikhompyutha yethu, kwaye njengoko umzimba wethu ulungiselela. ukulala. Nangona kungenakwenzeka ukuba abaninzi bakhethe ulungelelwaniso olugqibeleleyo apho izinto ziya kwenziwa khona, siya kubona ukuba olona tshintsho luncinci kwindlela yethu yesiqhelo, ngakumbi ngeeyure zakusasa, luya kuba nefuthe kubomi bethu kakhulu kwaye lusenze sibe namandla. kwaye sikulungele ukujongana nayo nayiphi na imingeni eziswe kuthi kukonke ukungalingani kwethu okunokwenzeka.
Ngelixa i indlu yesibini Isenokunika iimpendulo malunga nokukhethwa komntu, into ayikhethayo, nathanda ukuyitya kunye nento ayiphephayo, ngumfanekiso nje okhoyo kwihlabathi elinxibelelana nemilambo yezinyanya, ilifa lethu lemfuza, kunye nobukho bethu obuntsonkothileyo bokungazi. Siza kuyibona iminqweno yethu IVenus nomphathi wendlu yesibini, nomphathi wabo imiba ukukhonza ukubonisa iminqweno yethu kunye neemfuno zovakalelo sikholisa ukuba tuck kude usebenzisa ukutya. Abo bethu bangatyekelanga ekutyeni ngokugqithisileyo okanye ukukhetha okuninzi okungenampilo basenokuba ne-trine yeVenus kunye Mars oko kuya kubonisa uthando lokuhlangana, nangona ezinye iindawo kwitshathi yazo zinokuthi le nto ayisiyiyo into enokuthi idibanise kakuhle kwaye isuse amandla abo.
Ukutya kwethu okugqibeleleyo kubonwa ngemiba emihle yeNyanga, umlawuli wethu wendlu yesine, kunye nezona zinto zinenzuzo kakhulu kwindawo yazo kwisibonakaliso nakwindlu. Izikwere kunye nenkcaso yala maqumrhu athetha ngokutya okungasenzi sizive silungile. Umzekelo, ukuba umntu unesikwere seNyanga kunye noMars, kufuneka bafowunele ekutyeni kwabo ukutya okunezinongo kunye nokutya okuneziqholo. Inkcaso nge IMercury kuya kuzisa ukungaqondi kakuhle kunye neengxabano ukuba ukutya okuninzi kunye nembewu kutyiwe. Umba ocelomngeni kunye noVenus uthetha ngokunganyamezeli kwegluten, ingxaki ngeswekile, ukutya okunemibala kunye nezongezo ezenziweyo.
Neptune idityaniswe nendlu yesine yomntu, umbusi wayo kunye neNyanga igxininisa ukunganyamezeli kwethu i-toxins kwaye abantu abaninzi abanochuku lwale mibutho abayi kuva kakuhle nangona bekwigumbi elimnyama okanye bejikelezwe ngamavumba abukhali. I-Neptune iya kuqinisa nakuphi na ukungezwani komzimba kunye neempawu ezinikezwe kukukhetha okungalunganga kokutya kwi-physiology yethu, kunye nazo zonke iinkohliso, ukungazinzi kunye nokungakwazi kwethu ukunxibelelana nehlabathi lokwenyani kuvela kuqala kwindawo yalo.
Eyona ndlela ilungileyo yokuhlangabezana nomhla wethu kunye neenguqulelo esinqwenela ukuzenza kucwangciso lwethu kukuthabatha inyathelo elinye ngexesha. Umnxeba wezinyanya uya kukhwaza kwaye iminqweno yethu yomelele kakhulu ukuba singayiphatha xa sizama ukutshintsha yonke into kanye kwaye ngequbuliso sijike kwiinkalo zethu ezintle, siphephe ngokupheleleyo imvelo yeVenus kunye neyesibini indlu. Abantu abanonxibelelwano oluqinisekileyo lweVenus kunye neNyanga okanye baphathe umdibaniso wabo kwitshathi yokuzalwa bafumanisa kulula ukufumanisa oko bakufuna ngokwenene. Kwilizwe elifanelekileyo lefiziyoloji yethu, sonke siya kuthembela kula macandelo mabini ukuba asixelele ngokuzingela eyona nto ifunwa ngumzimba wethu.
Nangona kunjalo, ukuba kukho ukungqubuzana phakathi kwabo okanye ukungafani okwahlula iimfuno zabo, kufuneka siphendukele kwiimfuno zeNyanga kwaye siqonde ukuba iVenus isebenza kwihlabathi lethu elingenangqondo, lisidibanisa kwizinto esingenakuzifuna njengoko sivakalelwa kukuba. yenza. Oku akuthethi ukuba iVenus kufuneka ingahoywa nangayiphi na indlela, kodwa ayifanelanga ukuba ijongane nemiba yemihla ngemihla, iimfuno zethu zeyure ukuya kwiyure kunye nokukhetha. Le nxalenye yobomi bethu ngokwemvelo yeyeNyanga. Ukulungelelanisa ezi mfuno zangaphakathi, kufuneka sijike ngokuthe ngcembe kukhetho olubonwa kwimiba elungileyo yeemvakalelo zethu ezibuthathaka, sitye umfuziselo wemiba yenkxaso yeNyanga kunye nomlawuli wethu wendlu yesine, besebenzisa i-sextile yabo kunye. ISaturn ukuba sitye kakhulu njengoko kufuneka sisebenzise yonke into esinayo yokutya, okanye i-trine nayo Jupiter ukubuyisela izinto ezinamafutha emzimbeni wethu, ngokungathi ukwenza ubomi bethu bube lula.
Kwibhalansi egqibeleleyo, umzimba wethu unokusixelela into esiyidingayo ngeNyanga kwaye uVenus uza kuzisa kwaye abize ezi zinto eziphathekayo ukuze zizondle. Lusana esasikhe saba lusana oluqonda eyona pateni yeemfuno zenyama, kwaye owasetyhini wethu osele ekhulile, oneemvakalelo kufuneka alondle endaweni yokuba amnike into athanda ukuzithathela yona. IVenus kufanele ukuba yenze izibonelelo, iyantlukwano kunye nombala, ngelixa iNyanga ibona into eyithandayo nengayithandiyo. Yenza ukhetho lwakho lucothe kwaye lube novakalelo, uyazi ukuba ukuvumisa ngeenkwenkwezi inikeza iimpendulo malunga nokuba ujonge phi kwaye yintoni onokuthi ujike kuyo ukuze uhlambulule ihlabathi lakho leemvakalelo, imilambo yezinyanya, kunye nayo yonke imfuno ebomini bakho engazange yahlangatyezwa ngaphambili.
Aries Gemini Iponti Aquarius I-Capricorn